Caydii ugu xumeyd ee wariye u jeediyo madaxweyne Barack Obama (DAAWO) – SBC
Caydii ugu xumeyd ee wariye u jeediyo madaxweyne Barack Obama (DAAWO)
Posted by editor on Noofember 24, 2011 Comments
Caydii ugu darneyd uguna xumeyd ee abid loo jeediyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxaa ku dhaqaaqdey gabar wariye ah oo u dhalatey dalka Ruushka oo falkaasi aflagaadada & cunsuriyada ah ee ay ku dhaqaaqdey si weyn looga daawadatey telefishinada aduunka.
Gabar wariye ah oo lagu magacaabo Tatyana Limanova, kana mid ah wariyeyaasha wararka akhriya ee telefishinka REN TV ee dalka Ruushka ayaa iyadoo akhrinaysa war ku saabsan ismaandhaafka ka dhex aloosan Mareykanka & Ruushka ee ku aadan gantaalada Mareykanka & xulufadiisu ugu yeereen difaaca ee ay doonayaan inay ku rakibaan wadamadii horey uga mid ahaa gaashaanbuurtii Warsaw ee Ruushku horkacayey, taasi oo Ruushku si adag uga biyo diiday.
Tatiana oo farta dhexe taagaysa
Tatyana Limanova, ayaa markii ay akhrinaysay magaca madaxweyne Obama waxay kor u taagtey gacanteeda bixid iyadoo faraha kale inta laabtey farta dhexe (Middle Finger) kaligeed taagtey, taasi oo ah calamaad aflagaado ah oo cunsiyarad ahaan loo aaminay in ay ugu tala gashay Barack Obama.
Tatyana ayaa markii ay akhrinaysan magaca madaxweynaha Ruushka Dmitry Medvedev waxay u jeesatey hoos, iyadoon wax ficil ah muujin
Haweenaydan aflagaada ba’an u jeedisay Madaxweyne Obama ayaa Telefishinka ay ka shaqeyso ee REN TV wuxuu ka mid yahay warbaahinta ugu afka dheer wadanka Ruushka waxaana dalka Ruushka oo kaliya ka daawada 120 milyan oo qof, sidoo kale caalamka wadamo badan oo Mareykanku ka mid yahay ayaa si weyn looga daawadaa.
Tatyana Limanova waa wariye caan ah waxaana ay horey ugu guuleystey abaalmarin caalami ah oo dhanka mihniada saxaafada ay ku muteysatey.
Maamulka Telefishinka REN TV ee ay haweenaydan ka tirsan tahay ayaa sheegay in aanay waxtalaabo ah ka qaadeyn wariyahooda, isla markaana anaay ku qasbi doonin inay bixiso wax raali galin ah.
Falka aflagaadada ee wariyahani kula kacdey Madaxweyne Obama ayaa la sheegay in uu ku yimid warka gabadhu akhrinaysan oo la duubay ka hor intii aanu hawada galin,balse qalad ku yimid dhanka editing-ka ayey u muuqanaysaa in looga tagay, iyadoo sidoo kale ay jiraan warar sheegaya in ay aheyd ku talagal.
Linkj-ga Video-ga hoose Guji si aad u daawato wariyaha oo farta dhexe u taagaysa Obama magaciisa iyadoo akhrinaysa.
Janaayo 6, 2012 at 2:13 pm
wa sax marekanka iyo yahuuda wa in laga tirtiro
Janaayo 6, 2012 at 2:14 pm
wali way kuyareed hanolato wariye tatyana
Janaayo 11, 2012 at 9:55 am
Obamo cayda la caayay waa mid aan ku dageeray wariyaha wana uku mahad celina midaas waayo obamo waa madax weyne isla wayn dunidana iska dhiko ninka uku sareyo aduunka waxa uu hilmamay inu yahay african mahad sanidin somalida manta